Su'aalo badan oo aan Jawaab u waayay.
Wednesday January 02, 2019 - 21:56:42 in Wararka by Mogadishu Times
1-Hoobiye ayaa Xalane Ku soo dhacay maanta, Mareykanka ayaa usbuucii hore u sheegay Dadkiisa Mogadishu jooga in khataru soo socoto. Hoobiyuhu ma waxa uu ahaa jawaab, in aan run sheegaayay ogaada? Mise waa sii ogaa ayaa dhab ah? 2- Hayadaha Caalamiga
1-Hoobiye ayaa Xalane Ku soo dhacay maanta, Mareykanka ayaa usbuucii hore u sheegay Dadkiisa Mogadishu jooga in khataru soo socoto. Hoobiyuhu ma waxa uu ahaa jawaab, in aan run sheegaayay ogaada? Mise waa sii ogaa ayaa dhab ah? 2- Hayadaha Caalamigaa haddii ey been Ka sheegaan dhaqaalaheena iyago oo leh waa kobcay, ma Ku amaaneynaa beentaa? Haddii ey run Ka sheegan in Baydhabo shacab lagu dilayna, ma Ku dhaliileynaa? 3- UN haddii ey xanaaqdo in ey tiraa Asgari miskiina oo amarkii la siiyay fulinaya ayaan mushaarka Ka jareeynaa sax miyaa? Mise Ciddii Amarka bixisay ayaa dambiga leh?.